Mihemotra ny mpampiasa vola : betsaka ny onitra azon’ny mpiasa voaroaka | NewsMada
Mihemotra ny mpampiasa vola : betsaka ny onitra azon’ny mpiasa voaroaka
Par Taratra sur 30/01/2016
Tsikombakomba ve? Noroahin’ny orinasa vaventy mpitrandraka harena an-kibon’ny tany ny vehivavy, mpiasa iray. Voaporofo ny fahadisoana nataon’ity ramatoa ity, satria niainga tamin’ny famoahana antontam-baovao tsiambaratelo an’ny orinasa. Tsy nitsipaka ny fandroahana azy izy, ary naloa ny zony rehetra.
Taty aoriana, nitory tany amin’ny fitsarana ity ramatoa ity, nolazaina fa nandroaka tsy nisy antony miharo fanamparam-pahefana (licenciement abusif) ny orinasa. Nangataka onitra mihoam-pampana 2,3 miliara Ar izy, mifandanja 107 taona amin’ny karama ho an’ny mpiasa tsotra!! Na nampiseho ny porofo, antony nandroahana azy aza ny orinasa, nosazin’ny fitsarana handoa onitra 567 tapitrisa Ar an’ilay ramatoa ny orinasa vahiny.
Manana toerana amina minisitera
Ambara fa manana ny fahaleovantenany ny fitsarana, saingy misy ny ahiahy nahafantarana fa mety misy olona vitsivitsy mpanolotsaina ny filoham-pirenena, ao anatin’ity raharaha ity. Ary mpikambana ao anatin’ny kabinetrana minisitera iray rahateo ilay ramatoa mpitory.
Maro rahateo ny mpitsara mitaraina amin’ny fomba samihafa fa misy ny tsindry mahazo azy ireo. Hanaratsy ny endriky ny filoham-pirenena ny tranga toy izao, izay azo heverina fa mety tsy ho fantany.
Na izany aza, vao mainka simba ny tontolon’ny fampiasam-bola vahiny (IDE) eto Madagasikara, nohamafisin’ity fakana onitra mihoampampana sady tsy mazava amin’ny orinasa vaventy vahiny ity. Mahamenatra rahateo izany fampandoavana onitra mifanahantsahana amin’ny karama aman-jato taona izany.
Tsy maintsy fantatry ny firenena niaviany
Mazava ho azy, fa tsy maintsy ho fantatry ny mpampiasa vola vahiny hafa ity raharaha ity, ary azo inoana fa tsy hisy sahy hijabaka hanary ny volany aty Madagasikara, raha toy izao ny tontolon’ny fampiasam-bola eto amintsika. Sa izany mihitsy ny tanjon’ny mpitondra ?
Hanaitra ny masoivohon’ny firenena niavian’ilay orinasa vahiny ity raharaha ity, ary tsy maintsy hotateriny any amin’ny mpitondra ny fireneny. Ho fantatr’izy ireo izany fomba atao ny mpampiasa vola aty Madagasikara izany, ary manamafy fa tsy misy ny antoka sy ny fiarovana azy ireo aty amintsika. Tsy mahagaga raha mifarombaka handraharaha any Iran ny firenena sasany.